Ngesondo Dating ngaphandle ubhaliso - IVIDIYO INCOKO - ubomi Dating - live streams!
Dating Ulaanbaatar: Unako ukwenza yonke into ukuya kwi-Dating zephondo
Ukuba ufuna kuba uqinisekiso inombolo yefowuni, ungasebenzisa yethu entsha Ulaanbaatar (Ulaanbaatar) ngokunjalo konxibelelwano incoko kwaye eselunxwemeni kuphelaUkuba osikhangelayo a kubekho inkqubela, uya kufumanisa ukuba sino elungileyo womnatha ka-girls ukulungele ukuya kuhlangana nani. Kukho akukho izithintelo kwi-inani Dating zephondo ukuba samkela njengoko iibhonasi ii-akhawunti ye-unxibelelwano kwaye ngokwembalelwano. Le nkqubo kwaye kubalulekile budlelwane nabanye ukuba kufuneka esekwe wonke ubani. Kuyenzeka ukuba ubhalise i-website, nto leyo absolutely free. Ukuba ufuna a uqinisekiso inombolo yefowuni, ungasebenzisa kuphela omtsha isixeko Ulaanbaatar (Ulaanbaatar), ngokunjalo unxibelelwano incoko kwaye wesithili.
Ividiyo Iintlanganiso. Intshayelelo Ividiyo ENG - YouTube
Lo mdlalo imihla emva mhlekazi ubudala, kodwa kuba nabani na othe balingwe ngalendlela ngokwam njengomntwana, ninako na ukufumana ukudinwa kwaye fumana izinto ezintsha ixesha ngalinye, ude ube fumana zonke kubo.P umdlalo ngu Multilanguage, kuquka isi-Italian ulwimi kwaye kuphela moments ka-dialogue dubbed, ingaba i-ntetho ezindala centenaryIvidiyo Dating yi boy kunye pink iinwele, kusetyenziswa ohlala kuyo indalo, kwaye ngaphandle relatives, ukuba akunjalo oludala wolwazi ukuba bebe ekhohlo ngomoya wakhe utatomkhulu: A Bracelet igolide. (Asikholwa khumbula kancinci. Ngenye imini, xa wayeneminyaka zolile ukuba badle, ubona kwehagu abo urob a civilian zakhe ezixabisekileyo. Kuye, enraged yi-umbono lowo, wathi hurls nge yakhe yonke ukomelela ngokuchasene kwehagu, kwaye confronts kwabo, kodwa unfortunatly, ngu pig ophele ngowama-phezulu kwi isebe umthi, ziphantsi kwi-intloko imenze kuphulukana nayo sezingqondweni. Wawo wake, Ividiyo Iintlanganiso kusenokuba uqaphele ukuba bracelet utatomkhulu wakhe ngu bemkile, Xa sukuba stole kwehagu.
Apha iza yakhe uninzi ambitious imbono: ukuya kwi-befuna bracelet, kwaye owawunikayo ukuba stole kwaye thabathani, okanye nge elungileyo okanye engalunganga nge.
Ezinzima abantu uyakwazi kuhlangana apha
Womanizer, GE, yena ke i-alcoholic, free ukusela
Ngokunxulumene ezahlukeneyo-manani, abafazi kwi-Russian-ukuthetha amazwe ingaba significantly ngakumbi segregated yi-ngokwesini kunokuba abantuKanjalo hurts ukuba ngaphezulu ethandwa kakhulu i-uluvo lwam kukuba, le ngaphantsi authoritative kubalulekile. Wonke lesibini ngu-a crucial budlelwane kuba kubalulekile phantse ukwenzeka kuba bale mihla kubekho inkqubela ukuphendula isikhalazo.
Inyaniso kukuba zonke ezi nkcazelo ziyinyani
Kukho idla akukho abantu abaya ukwazi kuhlangana ekhaya kwi bar okanye restaurant ngaphandle"iyalalaprocess status"kunye nabo ngobo busuku.
Ingentla umzekelo akuthethi ukuba akukho usapho idyll.
Nantsi into isenzo sempumelelo inkumbulo kuko konke malunga. Zininzi loomama iiforam ukuba izimvo kwabaninzi imiba, ngokusekelwe engundoqo isizathu phantse bonke abafazi musa wear isuti. Azame ukuba masenze umntu. Tanchiki"yindlela uluvo injongo, ngaphandle bonke edlulileyo sophias.
a decent budlelwane.
Umfazi kunye negqiza eyona qualities asingabo kuphela banqwenela ukuba babe cheap, kodwa kanjalo ukuphuhlisa abanye abantu ke umdla. Nokuba elokugqibela ungafuna ukuzoba ukusuka inyaniso malunga uhlobo abantu kwaye ithemba kwaye mna-ukuphuhlisa bonke abantu, ethile ingxelo evela kwi-Intanethi waba ukuba"yintoni umntu kufuneka senze ntoni umfazi ufanele enze ntoni umntu kufuneka uyenze.Astute abafazi"flying eyimfama"imisebenzi eliqhelekileyo ezi qualities lonto yenza kubo inyaniso amaqhawe omzabalazo."Kwaye ngoko ke, ngobulumko-ukususela ukutya inkumbulo ukuba babies ingaba fried-abantu kanjalo ivumba flavors Jikelele. Ngoku ukuba sibe uthetha malunga wemiceli-concentrations ukuba inokwenziwa, makhe siqwalasele abantu abo kwaphuhliswa kwabo. Kwi ngezixhobo ezahlukeneyo ungqinelwano uqeqesho, mfundisi iintlobo, uqeqesho iisemina kwaye iinkomfa, ikakhulu personal ukukhula, uphuhliso lwamashishini noshishino. Basically, kukho izinto ezininzi abantu abo esayiniweyo phezulu nge ezinzima"injongo".
Kuba abanye, oku sele iselwa ngempumelelo ezi zinto, kodwa kuba abanye, ayinjalo.
Ilula kwaye frivolous Icht, abantu bamele kakhulu unusual visitors, njalo njalo. Hayi ke Mature abantu kukhula. I-ubuhlungu le imeko ukuchongeka.
Kwaye okubaluleke kakhulu, kuba decent ngesondo.
Abantu ke indawo kwaye ulwazi malunga ilizwe labo ukususela river. Elide-awaited vacation kwi-kobuso utshintsho ubuhle belizwe awaits kuwe. Ababukeli bomdlalo bangene kanjalo inkulu kune-avareji ingeniso babantu. Abantu abaninzi ingaba reluctant ukuba basondelelane ezinjalo acquaintances. Oku ayilunganga.
Abantu abaninzi andinaku kuphila happily nge-Intanethi ye-abahlobo.
Ihlala ukuqwalaselwa omnye esivakalayo. Oku onesiphumo isithuba sele disappeared kungenxa yokuba ngokupheleleyo ezahluka-hlukileyo. Kwaye Dating zephondo akavumelekanga ukuphendula emsebenzini abantu bamele, kodwa kamsinya baya kuza kuba ngaphezulu ixesha attack imithetho ulwazi. Ukuba unayo a ka-hayi ukufezekisa oku imbono, ukuba uyakwazi qinisekisa efanayo iphepha lemibuzo malunga ukuba ezininzi abafazi, xa ufuna ukukhangela into yokuqala kufuneka ukwazi, ungaya abanye impumelelo kule kwimeko yesi, kodwa ufuna ukutshintsha ixesha. Kodwa kanjalo ngokukhawuleza kakhulu kunokuba"omiselwe otyebileyo". Ukuba ufuna ukufumana idla otyebileyo ulwazi, ngoko ke eyona nto kulo iindawo ezininzi enkulu restaurants, ezivaliweyo hangouts okanye uncwadi obukhulu izinto. Nkqu abo kuba wasebenza injongo yawo kakuhle. Inyaniso yeyokuba otyebileyo abantu tshintsha imigaqo elawulayo, nkqu kuba likes yabasetyhini. Funda kwi, akukho mfuneko ngoko nangoko ujoyinela uqeqesho iiseshoni okanye enrich owenziwayo ubalo lwabantu ke prospects. Ukwenza oku, okokuqala, ndine elicetyiswayo inqaku ukuba kubuyisela i-kovavanyo engundoqo, abafazi, kodwa kanjalo ubani narrowed phambili. Ngale ndlela, ungafumana kakhulu ngaphandle ixesha lakho wachitha nosapho lwakho.
Mna balingwe yokuchitha abasweleyo, kodwa kunjalo, kwimeko a hobby.
Uyazi ukuba ngubani ukuba lean kwi kwaye uthathe subway phantsi street.
Zonke jewelry kwenza umfazi ncuma. Kufuneka ufumane uid ka-unnecessary prejudices kwaye prejudices nokuphuhlisa le femininity nemvisiswano emele yakhe personality. Oku ubomi apho kufuneka baqonde ulonwabo. Kufuneka ibe ngubani omnye ingaba oko, ngenxa yokuba bothers nina xa abantu yeka.
Umhla ukuba incoko. Ndiphila kwi-suburbs Los Angeles kwaye ndiqinisekile ukuba i-intanethi
Umsebenzisi-eyobuhlobo kwaye high-umgangatho ujongano, ekhawulezayo iqela ntetho nayiphi smiley ubuso kuba na incasa-ubhaliso-ofisi, onesiphumo okwangokuA umlinganiselo umncedisi we VIP isimo, kuquka abaninzi okuninzi phezu kwenu xa kufuneka fun, thetha kwaye uhlomele izinto ezintsha.
Unako kanjalo ukudlala kwi-intanethi imidlalo ye yolwandle iimfazwe kwaye Billiards, ngokunjalo dlala incoko playlists ukusuka i-oluzenzekelayo DJ abo touches i-music, kungenxa yokuba elikhulu kumnandi ukwazi ukuthetha isingesi emculweni lovers.
Ukongeza, ezahlukeneyo contests kwaye quizzes ingaba intertwined. Yalo engundoqo luncedo kukuba incoko uphendula, umzekelo, xa lakho, imoto. Mnandi ukuya kuhlangana nani, get ukwazi wena, okanye nje kuba mnandi, kwi omkhulu indlela.
Izikhundla ngaphandle nokubhalisa kwi-Maxstraff
Fumana umlingane wakho namhlanje
Akunyanzelekanga ukuba ubhale simemo kwakhona, kodwa singathetha kwi -"Hug-Incoko"candelo.
Passionate-intanethi Dating i-Russia, i-intanethi Dating ngaphandle ubhaliso panacea Dating site, Finland Dating zephondo, iinqwelo Dating zephondo, i-intanethi Dating imifanekiso profaylmoll Dating zephondo, dejtingwebbplats, ht Dating, Dating site.
Ngesondo Dating zephondo, omdala Dating site ngaphandle ubhaliso, Dating babulale, Dating ngaphandle ubhaliso, polite Dating zephondo, olona vavanyo Dating zephondo, ngamazwe Dating site, big Dating kwindawo entsha free Dating site.
Uthando kufuneka free. Lilungu namhlanje kuba Indlela kuba iphepha apho abanye kubo exaggerate Dating zephondo ingaba mediated nge civilization.
Kabini ingoma kwi-Eckersberg nge century-kuphela Dating lwenkqubo.
Bona indlela umntu ngamnye meets abantu abatsha, jonga iintlanganiso nabanye abantu, kwaye mhlawumbi kuhlangana ilungelo umntu.
Amawaka amadoda nabafazi, a ezinzima Dating site kuba academics.
Free imihla ngathi zange phambi
Ukungena LITSINGER. Khangela namhlanje, i-Ezinzima Dating site Dating for free. Xa bafika ke ixesha kuhlangana icacile abo ufuna ukuba uyonwabele kwaye umhla. Uninzi isiswedish Dating zephondo Bhalisa isithuthi free Dating inkonzo ye-Swedish icacile. Ekhaya Elithile ulwimi ubhaliso: isixhosa, isingesi. Isiswedish registry ye Vince Valentino.
Iminyaka: United States, Ale.
Isiswedish incoko-Dating ingcali ka-zintandathu -yeminyaka ubudala portals Jonkoping: Adelaide milano Com. Yenza ubomi a budlelwane. Lonke ulwazi ngaphandle isigunyaziso.
Eyona qhagamshela i-imeyili.
Khangela, Sweden, oyena Dating site kunye amashumi amawaka icacile kwi-intanethi. Personal ads kuba free ezinzima Dating kuba icacile. Amawaka photo ads ukufumana ingxelo kwi Yokutshiza i-Imeyili ngokupheleleyo free Asian Dating site, Dating zephondo ngaphandle ubhaliso, uvavanyo Dating zephondo, eyona Dating zephondo, scammers kwi Dating zephondo, Christian free Dating, qala yakho Dating, Dating zephondo ngaphandle ubhaliso, ezilungileyo free Dating ziza kuba otyebileyo, ukufumana iqabane lakho, igama Dating zephondo.
Dating abantu kwi-Elazig: free ubhaliso.
Qinisekisa yefowuni yakho inani qala entsha acquaintances kunye abantu Elazig Elazig isixeko kwaye incoko kwincoko amagumbi noluntu ngaphandle na izithintelo kwaye imidaNdifuna ukuya kuhlangana abantu kwaye boys kwi-Elazig kwaye yenze ngokupheleleyo for free. Ngomhla wethu Dating site, kukho akukho izithintelo kwi unxibelelwano kwaye ngokwembalelwano, iibhonasi ii-akhawunti kwaye izithintelo.
Kweli lizwe lethu, abantu fumana ngamnye enye, bahlangana nokuseka budlelwane nabanye. Qinisekisa yefowuni yakho inani kwaye yiya kwi-befuna entsha acquaintances kunye abahlali Elazig kwaye incoko kwincoko noluntu ngaphandle na izithintelo kwaye imida.
Njani ukuva ethambileyo kwi-Sweden
Yena assured ukuba onke amaxwebhu ekhutshwe kwi esemthethweni isihloko seleta banelungelo kuba ebekwe kwi-territory lizweOlandelayo inyathelo kufuneka athabathe kukuthi, ngoko ke, ukuthetha, socializing nabasebenzi bakho. Ngokufutshane, sicebisa ukuba kufuneka ahlangane hayi kuphela abantu esabelana uyakwazi zithungelana yakho s ulwimi, kodwa ngaphezu kwazo zonke wobulali abahlali. Ngokuqinisekileyo, ngu nzima ukuba abe umqali, rhoqo kwaye kuyo yonke indawo. Ingakumbi Sweden ngexesha nelasekuhlaleni, nto leyo kakhulu ngamanye amaxesha kunzima ukuqonda. Ukuba ufuna mamela nkqu isiqingatha ixesha, yakho entsha iza kuphucula ubomi kakhulu ngakumbi. Kuqala, kungcono ukuba zithungelana kunye Swedes zabo s ulwimi. Funda njengoko ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka, nangona yokuba Sweden ngu lunxulumano njengoko uninzi isixhosa-ukuthetha lizwe apho ke akuvumelekanga officially lunxulumano. Phantse wonke Swede uthetha isingesi, kodwa kusoloko kungcono ukwazi kuba uqinisekile ukuba baqonde ngcono inkcubeko. Ngaphandle, uyakwazi kuphela ukuthetha isingesi kunye umlingane wakho. Ukuba ufaka kwi company, ngokukhawuleza okanye emva koko wonke umntu uza tshintsha i-Swedish. Kwi-Sweden kulo nyaka, ngokwesiqu uqeqesho kwi-Swedish ulwimi ekubeni yabanjwa. Zombini kwi-intanethi ne-intanethi. Oku kuthetha ukuba lokulungiselela ukuhambisa unako ukuqalisa kakuhle phambi shenxisa. Kodwa nkqu ngakumbi umdla ngala i-ebizwa-"exchange amazinga", apho zombini partners, ngamnye ngaye ifuna ukufunda ezinye ke ulwimi. Luncedo le ndlela yokusebenza kukuba umntu learns ulwimi xa Umongameli iyahlala, nto leyo obaluleke kakhulu, kwaye akakwazi kuhlawula ipeni. Ekuphenduleni, kubalulekile ngokwaneleyo ukufunda omnye umntu ke s ulwimi. Ngenye imini uyayiqonda into yokuba uyakwazi ukuthetha isiswedish, kwaye lowo okanye yena unako ukuthetha yakho ulwimi. Ukongeza, le ndlela enza kube lula ukuba ingaba umhlobo kwi-Sweden phambi kokuba uyise. Sweden yi greedy lizwe. Ukuba ufuna musa njenge ikofu okanye iti okunqanda, awunokwazi ukubiza ngokwakho i-Swede. Kwaye ingekuko kuphela ukuba, kodwa kanjalo kunye associative cake nezinye sweets. Ukuze ungqinelwano i-intake ka-calories kumzimba, Swedes ukusebenza ngeendlela ezininzi emidlalo kwaye baphile esebenzayo ukuzonwabisa.
Umkhenkce hockey ngu okuthile efanayo kwi-national isebe lemicimbi yenkcubeko nemidlalo.
Ingakumbi ethandwa kakhulu kumantla lizwe. Ukudlala kwi qela okanye kwi-i-sport, ukusebenza kwi-emidlalo ezifuna a iqabane lakho, kuvumela ukuba ufumane ulwazi olutsha kunye nabahlobo. Kodwa ukuba hockey ayiyi kuba wena ufuna ukushiya yakho ngaphambili amazinyo kule ndawo, kufuneka uzame ngaphantsi aggressive kwaye extreme emidlalo. Njenge tennis, nayo ethandwa kakhulu kwi-Sweden, okanye kolwalwa climbing. Ewe, someday, kwakutheni salsa. Ndwendwela omnye iindlela ukuqonda isiswedish autonomy kunye nolingano. Mhlawumbi ezi mpawu zimbini suppressed ngabo njengoko kwanti ongomnye ehlabathini. Ukuba usebenzisa, umzekelo, umntu, musa kuba surprised ukuba kubekho inkqubela ucela kuwe ngaphandle ngomhla okanye nje kuba ikofu. Kwaye bonke ngakumbi isizathu hayi kuba embarrassed ukuba kufuneka share-nkqubo nomthetho. Yiyo njani ke kwenzeka. Ukuba akukho namnye ongomnye akunjalo mema kuwe, ngomhla kwaye kuyafana kwenzeka ntoni nge umntu olilungu free, baninzi Dating zephondo kwi-Sweden kuvumela ukuba ufuna ukwenza udibaniso, nkqu uninzi introverted abantu ikakhulu ufuna ukuvula omnye umntu. Uninzi lwezi ziza bakhululekile, kodwa banikela ezongezelelweyo iinkonzo kuba imali.
Ukuba Dating umlingane wakho scares i-esihogweni ngaphandle Kuni, unako zama iqela iintlanganiso kuba abantu. Ngomhla we-zephondo njenge rhoqo Dating ads, apho ukwenza uluhlu na kakhulu modest isixa-mali imali. Ngesiqhelo, ezi ziza kuvumela ukuba bona abathathi-nxaxheba kwangaphambili. Ngasinye ngeveki, njengokuba umthetho, uthotho iintlanganiso ingaba umbutho, i-izihloko apho idla musa overlap. Ngoko ke, kulula ukufumana iqabane lakho ukuba uza kuba kakhulu anomdla. Ukuba ufika Sweden soqeqesho, zama ukufumana zonke juice. Ujoyinela cups, nezinye iintlobo, kwaye izifundo.
Kodwa oko kuya kusinceda ezisixhenxe ezilungileyo iincam
Ewe, nje kuthi ngayo kunye bolunye uhlanga, simi kumgca kuba microwave kwi-dining igumbi. Entsha iintlanganiso ziqhutywa kusenokwenzeka ukuba ukuzisa entsha izimemo. Njengoko ngenxa entsha enkulu iinkampani kodwa kwakhona entsha iintlanganiso. Ndiza abajikelezayo ngomhla omnye zam endizithandayo isiswedish imisetyenzana yokuzonwabisa. Alikwazi ukwahlula okuninzi malunga namanye amazwe njengoko kumalunga elizweni lakhe. Emantla, umzekelo, ngu-hluke kakhulu ukusuka emzantsi Afrika hayi kuphela yayo excessive uthando hockey. Zephondo ezingekho okuninzi ikhangela izindlu njengoko soloko usenza entsha abahlobo kunye emnqamlezweni-yenkcubeko budlelwane nabanye. Ukuqhagamshela i-Swedish portal, abasebenzisi abo ukungena iqela share umdla. Ukungena elinye amaqela, ngokulula khetha isixeko ufuna ukungena.
Oku ngcono kunokuba loluntu networks, kwi-amaqela apho abantu ukusuka zonke phezu kwehlabathi kusenokuba langoku.
i-intanethi kunye kwi-intanethi, yiya kukufutshane ukuba ngamnye ezinye kwaye uhlomele ngamnye enye. Umzekelo, ukuba uhlala kwi-Tumba, uyakwazi ukungena iqela creative writers. Elinye iqela kwi-Gothenburg.
Kodwa kukho iqela ibhola yomthi ifeni kwaye onjalo salsa.
Nangona kunjalo, iqela le ndawo iqulathe amaqela loluntu networks ukuba abasebenzisi rhoqo kuhlangana kwi-yokwenene ebomini.
Yabo budlelwane uyaya ngaphaya Internet, ke lokwenene.
Abanye abantu, nje ngoba yena besiya Sweden, ukuva ukuba kungcono hayi kuba abo bamele, kwaye ugqaliso yayikukwenza kwi unxibelelwano kunye Swedes. Kodwa Umongameli kwaye umseki uthi:"kunzima kakhulu faka entsha inkcubeko, nje yiya Tumba enye European isixeko, kwaye esezantsi ye abahlala apho baya differ."Mna recommend ukuba ufuna ukuchitha lo mmangaliso isigaba kunye abantu abaya ndimbuza imibuzo kunye kwaye esabelana ungenza ngokukhululekileyo xoxa umehluko."ikunceda newcomers mfundisi isiswedish inkcubeko, i-olunzulu nzulu le-Swedish ulwimi Ekugqibeleni, yona ikunceda ukufumana umsebenzi kwaye ngenisa i-economic yam ka-Sweden. Kuya kanjalo inkxaso i-website kuba abantu abathe bagqiba ukusa kwelinye ilizwe. Kule indlela, ukuhamba izikhokelo ukuba ngaphezu kwesinye isixeko ezifumanekayo, kuquka ezine enkulu izixeko kulo Sweden. kule site, ungafumana ukwazi immigrants ukusuka kwilizwe lakho okanye kwenye, buza kwabo kuba ingcebiso, okanye, ngokulondolozayo, unike zonke kunokwenzeka noncedo abo bakwisidingo. Kubalulekile hayi overdo nge unxibelelwano kwi ziza kuba immigrants.
Kude ikhaya lakho lizwe, ungaziva ubuhlungu, kwaye kubaluleke kakhulu hayi accumulate oku ndinovelwano kwakhona.
Kodwa ukuba ucinga ayinamsebenzi, apha ke i-urgent tip ukuqhagamshela i-Expat uncedo u. Umlawuli embindini uthi:"Ngamanye amaxesha sonke kufuneka ukumisa ukuhlola, measuring ngayo ngokuchasene ntoni kwaye kufuneka kwenziwe."Ngamanye amaxesha into eyenzekileyo akakwazi kuma phezulu, umntu vala ukusuka ngokwakhe, kwaye yonke into uyaya ezingachanekanga. Oku kubaluleke ngakumbi frightening kwi-exile. Sifuna ukunceda abantu fumana zabo abilities, ukuhlola zabo abilities, kwaye musa get discouraged xa kukho into uyaya engalunganga."Ingxowa-entsha abahlobo ngu incredibly nzima. Ngoko khululeka baqhubekeke ukuthetha yakho s ulwimi, nkqu ukuba ufuna immerse ngokwakho kwi-omtsha inkcubeko kunye intloko. Kubalulekile na ukuba aphule iingcambu siqhubeke unxibelelwano nabanye abantu ngendlela efanayo ulwimi. Kodwa ungalibali ukuba kuyimfuneko ukuseka nabo kunye indigenous abantu ngexesha elinye. Ukuba ufuna ukudlala kwi kunye fronts, uyakwazi ukwakha omtsha ubomi kwixesha elifutshane.
Ukuba Ufuna liked inqaku okanye awuvumi kangakanani nezi nkacazelo lombhali uluvo lwam, uyakwazi uluvo ngomahluko inqaku kwaye Zichaziwe yakho entsha ye imboniselo.
Ufuna ukufunda njani ngokusesikweni a sofa okanye latin-TV.
Apha uyakwazi ukuphuhlisa inkqubo ye yonke into kwi-intanethi, kwaye kwangoko ukugcina i data kwi khomputa yakho.
Okanye uyakwazi ukulayisha ezansti engahlawulelwayo kuba umphakathi uyilo kwendlu, apartment, okanye igumbi. Khetha nje ukuba omnye suits kuwe kakhulu.
Personal amava: abantwana bam nzulu kwi-Sweden
lezinto ezinako ukwenzeka, lubandakanya
Icace phandle ukuba Engilane abantwana yiya yesikolo kwi-emine, kwaye isihungarian kindergarten emva lunch baya kunika sandwiches kunye bacon kwaye onionsNgendlela yakhe ekhethekileyo amaphulo abazinikeleyo ukuba specifics wemfundo kwiindawo ezahlukeneyo amazwe ehlabathini, O.
Namhlanje sizaku Sweden, apho ubomi ngunina ezimbini abantwana Irina Erickson, wathi, ngubani kuthi njani na izikolo kwi-kindergartens eli lizwe.
Nyana wam uya esikolweni, kwaye younger omnye uya kindergarten. Ngomhla we-kwangaloo mini, abantwana iya kuya esikolweni nge isigqibo umasipala apho ngabo yezifundo ezinomsila kwezolimo, ngoko ke ukuba u-ezikufutshane izixeko lonyaka wesikolo unako qala kwi ezahlukeneyo imihla. Kangangokuba, yesikolo iphela ngomhla ezahlukeneyo phinda-phinda, kodwa oku ngesiqhelo, kwenzeka ntoni lokuqala nesiqingatha June. Zintlanu umphinda-phinde ngo nyaka, abantwana esikolweni kuba iiholide: iveki enye ebutsheni kweyenkanga, phantse kwiiveki ezintathu ngexesha Christmas, emidlalo ekufuneka iveki ngexesha iiholide ngofebruwari, Easter iiholide ngoaprili, kwaye ihlobo ukusuka kweyesilimela ku-agasti. I-kindergarten ngokwayo ngu-vula zonke unyaka macala onke, ngaphandle kokuba weekends kwaye iiholide. Uqeqesho lootitshala ngalo mhla wethu yesikolo iqala ekuseni.
Ibakala iqanda abantwana bafunde kuqala, kodwa kunoko aye get, i kamva baya ugqiba izifundo zabo.
Umzekelo, abantwana kwi-anesihlanu ibakala ukufunda ngaphambi koko. Ukuba abazali kwabo bamele ngxi studying okanye ukusebenza, ngoko ke umntwana esabelana umhla iqela imisebenzi iyafumaneka: phambi, oko kukuthi kukho umntwana lowo unako kuba ngomhla iqela. ibakala lokuqala kwaye emva esikolweni. I-igadi wethu kuluntu, imisebenzi ne -: a. Kwakamsinya kakhulu, thina isicwangciso ukuvula a busuku iqela kuba abantwana abantliziyo oomama kwaye zooyise umsebenzi shifts. Kwinkqubo yethu zoluntu, apho unako kuphela kuba omnye umntwana kwi-kindergarten ngubani na imisebenzi okanye learns ukusuka nabazali babo. Ukuba unina okanye uyise ukwikhefu okanye kubancedisi ngawo onke ngenxa umntwana care, inani iiyure ngexesha apho anakho tyelela igadi ngu limited. Sinazo ezi yure, kwi-wealthiest uluntu sinako kunikela iiyure, kwaye Tumba sinikeza iiyure ngeveki. Umntwana uyakwazi kuphela hlala kwiqela njengoko ixesha elide njengoko zinjalo bengenamakhaya, ukusebenza, okanye studying. Kwezinye oomasipala, unako kanjalo biza abazali bakho emsebenzini kwaye ukufumana phandle zabo esebenza iiyure.
Ngexesha esikolweni, abantwana get a free zinokuphathwa lunch.
Ukuba umntwana attends efanayo iintlobo, banikela kuthi Sakusasa kwaye kwemini iti. Kunokwenzeka muesli kunye yogurt, wesonka okanye iziqhamo. Kukho name emyezweni apho abantwana banako ukuba bonwabele Sakusasa, snacks, lunch kwaye snacks. Abantwana fed eshushu ukutya, iziqhamo nobisi. Andiyazi malunga nezinye uluntu, kodwa zonke zethu ukutya ubani abe sugar-free, ngoko ke ngabo engqongqo kakhulu. Umyeni wam ndiye emsebenzini njengoko abazali, ngoko ke sino oku ebizwa-imozulu. Abantwana abantliziyo abazali umsebenzi shifts okanye umsebenzi part-time ngexesha iveki linokuba ezahlukeneyo kindergarten lwenkqubo. Thina kukhankanywe umntwana ngaphambi koko. Iqela sele okhethekileyo lenjongo apho kufuneka cofa iqhosha ukuba ubonakala, emva kokuba umntwana ke igama ezongeziweyo phezulu oluhlaza. Abantwana besenza oku happily nge kwabo, enthusiastically ujonge kwi-uluhlu igama lakhe kwaye nkqu amagama classmates abathe sele zilawulwe kwi-enroll. Q: i boys unee Sakusasa.
Emva Sakusasa, abantwana bamele umahlule kwi amaqela: Omnye makahlale ekhaya aze imisebenzi kwi project, kwaye enye uyaya ngaphandle.
Ngoku abantwana bethu bamele ukuba bathathe inxaxheba kwiprojekthi oko kukuthi abazinikeleyo kwihlabathi apho sifuna ukuphila kulungile, kwaye yonke into emyezweni uyabonakala ngokusebenzisa le lens. Uninzi ixesha devoted ukuba ecology, umzekelo, abantwana waya zizilo zehlathi qokelela garbage. Kodwa ihlabathi apho sifuna ukuphila kakuhle ayiyi kuphela ecological, kodwa kanjalo icimile kwaye kwakhiwe ubudlelwane phakathi: Abantwana zichaza ukuba ithetha ntoni ukuba ibe okulungileyo companion, indlela kuziphatha kakuhle kwi-dining igumbi. Ngexesha lonke inkqubo photographing nokukhetha iifoto, i-sithunywa ngu wabeka kwi-corridor ye-projector ngoko ke ukuba abazali uyakwazi ukubona umntwana wakho kwaye yakhe companions. Kwi-ezandleni abazali, iifoto asingawo onikiweyo, kwaye photographing e amaqela akuvumelekanga. Oku kubangelwa ukuba iifoto ibonise kwi loluntu networks, umzekelo, babe kuba langaphandle umntwana. Oku yalandelwa i-lunch.
Wokufunda kwi-Sweden iqala kwi-ileta yesibini ka-agasti
Oko iqulathe a engundoqo dish, ezifana meatballs okanye intlanzi, i-icala dish (umjikelo iitapile, rice, noodles) kwaye salad (carrots, cabbage, broccoli). Emva lunch, abantwana idla hlala kwaye yiya ukudlala kwi ibala lokudlala okanye amaqela. Kunye okulungileyo imozulu, abantwana uyakwazi ukuchitha yonke imihla outdoors, ngoko ke kindergarten ootitshala baya kukwazi ukufumana elungileyo tan kwi-epreli. Nkqu ukuba imozulu kubi, abantwana baya ngxi bahamba kuba ukuhamba, hayi kuba ixesha elide. Ngexesha esikolweni, abantwana malunga efanayo njengoko ndiya lezinto ezinako ukwenzeka, lubandakanya kwi-Sweden iminyaka emininzi eyadlulayo.
Kunjalo, kukho umehluko, kodwa hayi ingcamango.
Umzekelo, i-math inkqubo kancinci lula, kodwa isixhosa ulwimi kakhulu ezinzima, ngoko ke kwi-anesihlanu ibakala, nyana wam uthetha kwaye ikuqonda isingesi. Abantwana umsebenzi kakhulu kwi-amaqela, yenza iqela iintetho. Kukho elizimeleyo uphando kwaye ingxaki-isombulula. Amabakala kuba anesihlanu ibakala hayi, baya kuphela kubonakala kwi-classroom, emva inani elikhulu wesizwe exams kwi-ezintathu engundoqo subjects: isiswedish kwaye isixhosa kwaye mathematics.
Utitshala ke ewonke amanqaku iboniswe ngokusekelwe iklasi uvavanyo kwaye exam inqaku.
Abazali bamele kwi-intsingiselo uqhagamshelane kunye ootitshala, yesikolo kanjalo iimfuno mobile phones, ngokunjalo oomawomkhulu kwimeko abazali ngesiquphe, musa qhagamshelana nabo ngoko nangoko.
Kwiindawo ezininzi amaziko, kukho ebizwa-mbhodamo ulawulo nganye umntwana, apho iqulathe zonke ezifunekayo ulwazi: Qhagamshelana amanani, allergies (ngesiquphe ekubeni ukuthatha amayeza), kunye nezinye ebalulekileyo ulwazi. Kulo nyaka, abantwana kugqitywe ukuba earn imali kuba trips kuba lonke udidi. Thina baked cupcakes kuba ziyathengiswa waza waseka iqela kwi-disco.
Konke oku, kunjalo, waba eyenzekayo kuba abantwana, kodwa abazali baba yinxalenye ethabatha kwi kakhulu eyona kwaye uninzi ezixhaswayo boys.
Kwi-Sweden, ootitshala ezifunekayo ngumthetho ukuba siyabahlonela abantwana: Umzekelo, abasokuze disclose uvavanyo ukuba lonke udidi, ungaze wenze mbhodamo uhlalutyo iiseshoni. Konke oku kwenziwa kwi meko-yi-meko qho ngonyaka, kwaye ukufunda inkqubo kanjalo izama adapt ukuba iimfuno ngamnye umntwana. Yesikolo inkqubo kwi-Sweden kakhulu flexible: ukuba ufuna akhange na kokuba ixesha ukufunda into ngoku, ungasoloko yenze kamva. Ngu-umcimbi ka-ephambili. Kwenzeka njani ukuba mnandi ngayo nayiphi na imeko ndinako buza utitshala umbuzo wakho, kwaye uya kufumana ixesha kuba impendulo yam.
ividiyo incoko free ubhaliso ividiyo Dating site free omdala Dating ubhaliso intshayelelo free photo usasazo ividiyo iincoko ngaphandle ubhaliso esisicwangciso-mibuzo roulette iminyaka ividiyo Dating profiles omdala Dating videos ka-girls ividiyo incoko ngaphandle ubhaliso ngaphandle izithintelo Chatroulette ngaphandle ads